Iloft enelanga, iToyile kwaye inomtsalane
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMirce
Le ndlu enkulu kwaye enelanga ine-charm ekhethekileyo kunye nomoya wobugcisa ngenxa yezinto ezingaqhelekanga zefenitshala kunye neenkcukacha, ezinye zidalwe kwaye ziyilwe ngumnini-Lidija Vaglenarova, umyili wempahla owaziwayo.
Indawo yam ibekwe kwindawo ezolileyo embindini kumgama nje ohamba ngemizuzu embalwa ukusuka kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo esixekweni. Ngeendawo ezibalulekileyo, ndibhekisela kwiindawo zokutyela kunye nezona zidumileyo kunye nemivalo, indawo yaseBohemian - indawo apho unokufumana khona ukutya okuyinyaniso kweMacedonian kunye nomoya, isikwere sesixeko, kunye nepaki yedolophu, izikhumbuzo zeSkopje, iimyuziyam kunye nezakhiwo ezibalulekileyo, kunye eyona jewel yokwenyani yaseSkopje-iOld Turkish Bazaar.
Ukongeza kwindawo egqibeleleyo, indawo yokuhlala ibekwe kwisitrato esithe cwaka.
Le ndlu enkulu kwaye enelanga inomtsalane okhethekileyo kunye nomoya wobugcisa ngenxa yamaqhekeza ayo efanitshala angaqhelekanga kunye neenkcukacha ezithile ezidalwe kwaye ziyilwe ngumnini-Lidija Vaglenarova, umyili wempahla owaziwayo. Iphezu kwesinye sezakhiwo zokugqibela ezilungisiweyo ezisuka eSkopje endala ezasinda kwinyikima ngo-1963.
4.93 · Izimvo eziyi-254
Andikwazi ukuyigxininisa into yokuba igumbi lethu likufuphi kuyo yonke into eSkopje! Ukanti, ikwisitrato esithe cwaka, kude nezihlwele kunye neemoto ezixinayo. Igqibelele nje :)
Umbuki zindwendwe ngu- Mirce
Sihlala kumgangatho osezantsi ngoko siya kuhlala sikhona ukuze sibonelele ngoncedo kwiindwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwabo kwigumbi. Ndikulungele ukukubonisa xa ixesha likuvumela, okanye ndikunike iingcebiso malunga nokuba yintoni ebalulekileyo ngokundwendwela.
Sihlala kumgangatho osezantsi ngoko siya kuhlala sikhona ukuze sibonelele ngoncedo kwiindwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwabo kwigumbi. Ndikulungele ukukubonisa xa ixesha likuvume…